> Resource> iPhone> Olee mbupụ iPhone Ndi ana-akpo ka CSV enweghị iTunes
Chọrọ ịgbanwe a ekwentị, ma ọ bụ nanị mbupụ gị iPhone kọntaktị dị ka a CSV faịlụ na gị na kọmputa maka a ndabere? Luckily, isiokwu a bụ ihe na-egosi abụọ ngwọta ka ị mbupụ kọntaktị site na iPhone ka CSV faịlụ gị PC ma ọ bụ Mac.
Mbụ ngwọta bụ iji Wondershare TunesGo (Windows), a mma software enyere gị aka ijikwa music, videos, photos, kọntaktị, SMS, iMessages na MMS na gị iPhone. Ọ na-enye gị ka ị na selectively mbupụ kọntaktsị na gị iPhone ebe nchekwa, iCloud, Exchange, Yahoo !, wdg dị ka a CSV faịlụ, otu ma ọ bụ multiple vCard faịlụ (s).
Mbupụ iPhone kọntaktị na CSV faịlụ, ị nwekwara ike gbalịa Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake). The iPhone kọntaktị extractor ngwá ọrụ na-ahapụ gị mbupụ kọntaktị, ozi, foto, ndetu na ndị ọzọ na iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, niile iPads na iPod aka 5/4 na kọmputa. E wezụga, i nwere ike iji ya iji weghachite data ehichapụ na nso nso si gị iDevice, na-enweghị mmerụ na ugbu a data na ya.
Ngwọta 1: Export kọntaktị site na iPhone ka CSV na TunesGo
Ngwọta 2: Export iPhone kọntaktị na CSV enweghị iTunes na Dr.Fone
Download na wụnye TunesGo na gị Windows kọmputa. Mgbe ahụ, lelee mfe nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone ka Windows kọmputa
Jikọọ gị iPhone na kọmputa site ịkwụnye n'ime a USB cable.Run TunesGo na kọmputa. Nke a software ga-ntabi ịchọpụta gị iPhone, na mgbe ahụ na-egosipụta ya ke akpan window.
Cheta na: TunesGo arụ ọrụ zuru okè na iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 na iPhone 3GS na-agba ọsọ iOS 5 na iOS 6.
Nzọụkwụ 2. Export iPhone kọntaktị dị ka CSV faịlụ
Bịa ekpe sidebar. Pịa "Ndi ana-akpo". N'okpuru Ndi ana-akpo Atiya, ị pụrụ ịhụ na kọntaktị echekwara na gị iPhone ebe nchekwa, Yahoo !, iCloud, Exchange na ndị ọzọ na akaụntụ. Họrọ iPhone ebe nchekwa ma ọ bụ otu akaụntụ na ị chọrọ mbupụ kọntaktị site na. Na kwekọrọ ekwekọ kọntaktị window, họrọ gị chọrọ kọntaktị.
N'elu akara, pịa "Import / Export". Na ndọpụta menu, họrọ "mbupụ niile kọntaktị" ma ọ bụ "Export Họrọ Ndi ana-akpo". Mgbe ahụ, ị ​​ga-esi ụfọdụ nhọrọ. Pịa "ka CSV File". Mgbe faịlụ nchọgharị windo na-egosi, na-agagharị kọmputa gị ga-a zọpụta ụzọ maka exported CSV faịlụ.
Cheta na: mbupụ kọntaktị echekwara na akaụntụ, dị ka iCloud na Yahoo !, nke mbụ niile, ị kwesịrị ị na banye na ihe ndekọ na gị iPhone.
Gbalịa TunesGo mbupụ kọntaktsị na iPhone ka a CSV faịlụ.
Ihe ọ bụla ị na-na na a Windows njirimara ma ọ bụ a Mac onye ọrụ, ị nwere ike na-yiri nzọụkwụ mbupụ iPhone kọntaktị na kọmputa na Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ọzọ, ka na-agbalị na Mac version ọnụ. Download a free ikpe nke Dr.Fone n'okpuru na wụnye ya na kọmputa gị.
Ẹkedori usoro ihe omume ị ga-enweta isi window n'okpuru. E nwere ihe abụọ mgbake ụdịdị maka gị nhọrọ. Họrọ abụọ na otu onye: naputa site na iOS Ngwaọrụ, nke-enye gị ohere kpọmkwem iṅomi gị iPhone niile data na ya. Mgbe ahụ jikọọ gị iPhone na kọmputa site na a dijitalụ USB.
Ọ bụrụ na ị jikọọ iPhone 5 ma ọ bụ iPhone 4S, mmalite window nke usoro ihe omume a ga-emere ka ndị a:
N'ihi na iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS, na windo ga-adị ka nke a:
Nzọụkwụ 3. iṅomi gị iPhone maka kọntaktị na ya
Dị ka ị na-ahụ, ị nwere ike ozugbo pịa Malite iṅomi bọtịnụ na window ka iṅomi gị iPhone 5 ma ọ bụ iPhone 4S.
N'ihi na iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS, i kwesịrị itinye iPhone si scanning mode n'ihu gị scannig ya. Soro ntuziaka n'okpuru ịnọgide:
Usoro ihe omume ga-akpaghị aka iṅomi gị iPhone maka data na ya, mgbe ị na-ọma ga-esi n'ime scanning mode gị iPhone.
Nzọụkwụ 4. Export iPhone kọntaktị dị ka a CSV faịlụ
Mgbe Doppler, usoro ihe omume ga-n'ịwa a akụkọ n'okpuru. Na Doppler akụkọ, ị nwere ike ihuchalu niile data otu otu. N'ihi na kọntaktị gị, ị nwere ike ịlele ya site ị na-ahọrọ Ndi ana-akpo na ekpe. Pịa Naghachi mbupụ ya na kọmputa gị. E wezụga CSV format, ị nwekwara ike mbupụ ya na usoro nke VCF ma ọ bụ HTML.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Dr.Fone maka iOS inwe a na-agbalị!